ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ခရစ်တော်ဘုရားဆုတောင်းခြင်း | Christ's Prayer in Gethsemane | Real Conversion
ဘပ Dမ. R. L. Hပာနမျယ Jမ.
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက် လောစ်အိန်ဂျလိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်။
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေ့စဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှကယ်လွတ် နိုင်တော်မူသောသူကို ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ (ဟေဗြဲ ၅း၇)”
အနက်ဖွင့်ကျမ်းများက ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ အံ့ဩဖွယ်ဝိဝါဒ ကွဲပြားကြသည်။ ထိုသူတို့ အားလုံးက ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ ခရစ်တော်ဆုတောင်းနေခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။ ထိုသူတို့အထဲက တစ်ချို့သော သူတို့က ယေရှုသည် နောက်တစ်နေ့လက်ဝါးကားတိုင် တွင် အသေခံရမည့် အခြင်ငးအရာမှ ကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်ဆီ တောင်းလျှောက်ဆုတောင်းသည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒ ၅း၇ ကျမ်းပိုဒ်၏ ရှုပ်ထွေးသော အယူအဆ သီဩရီကို ဒေါက်တာ လန်းစကီးမှတ်ချက်ပေး ဖြေကြားထားသည်။ (အာရ်.စီအိပ်ချပန်းစကီး တီအိပ်ချဒီ၊ ဟေဗြဲဩဝါဒစာနှင့် ရှင်ယာကုပ် ဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ခြင်း၊ အော့စ်စဘက်ပ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၆၆ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း စာ ၁၆၂-၁၆၅ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၅း၇ မှတ်စုအရ)။
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေမခံခင်ည တစ်ကိုယ်တည်း ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ ဆုတောင်းပဋ္ဌနာ ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် သေသေချာချာ လေ့လာဆင်ခြင်ကြပါစို့
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ သေခြင်းမှကယ်လွတ် နိုင်တော်မူသော သူကို ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဋ္ဌနာ ပြုသဖြင့် ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ် ၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)
I. ပထမ၊ ခရစ်တော်ဘုရား ဤလောက၌ သက်ရှိထင်ရှားစဉ် အသက်တာ၌ ဆုတောင်းခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက ထောက်ပြသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်က ယေရှုခရစ်တော် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်မကြွလာခင် လူဇာတိကို မခံယူခင်က အဖြစ်အပျက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ဤလောကမှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် ယေရှုဘုရား ဤလောက၌ သက်ရှင်ထင်ရှားစဉ် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ “သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညိုးငယ်ခြင်း” နှင့် ဆုတောင်းခြင်းကို အာရုံစူးစိုက်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုဘုရား၏ ငိုကြွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ဝိသေသဖြစ်ရပ် သုံးရပ်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ပထမအကြိမ် ငိုကြွေးချိန်သည် လာဇရုသချုØင်းကုန်း၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာမိန့်တော်မူသည်မှာ “ယေရှုသည် မျက်ရည်ကျတော်မူ၏” ဟု (ရှင်ယောဟန် ၁၁း၃၅) တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ငိုကြွေးခဲ့ခြင်းမှာ ယေရုဆလင်မြို့အနီးသို့ ရောက်၍ ကြည့်မြင်လျှက် ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်၏။
“ယေရုဆလင်မြို့အနီးသို့ရောက်၍ ကြည့်မြင်လျက် ငိုကြွေးတော်မူ၏” (ရှင်လုကာ ၂၉း၄၁)
ဒေါက်တာ ဂျေဗန်နုန် မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “တတိယမြောက် ယေရှုငိုကြွေးခဲ့ခြင်းသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ (ဂျေဗန်နုန်မက္ကီး တီအိပ်ခ်ျဒီ Thမက Thန ငြဘူန သောမက်စ်နဲလ်ဆင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ၊ ၁၉၈၃၊ အတွဲ၊ ဗီ၊ စာ ၅၄၀ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၅း၇ မှတ်စုအရ) သေချာသည်မှာ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် ယေရှုဘုရား လာဇရု၊ သချုØင်းကုန်း၌ ငိုကြွေးခြင်းမဟုတ်သလို၊ ယေရုဆလင်မြို့အနီးသို့ရောက်၍ ကြည့်မြင်လျှက် ငိုကြွေးနေခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းလည်း မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် ယေရှုဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်း မတိုင်ခင်ည စိတ်နှလုံးအလွန် ညှိုးငယ် လျှက် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ ဆုတောင်းနေခြင်းကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
မဟာနာမတော်မြတ်၊ လောကီ လူသားများ
ဟာလေ လုယာ! အံ့ဖွယ် ကယ်တင်ရှင်!
(ဖိလိစ်.ပီ.ဘလစ် ၁၈၃၈-၁၈၇၆ သီကုံးရေးသားသော ဟာလေလုယာ!
(ဝီလျှံ.ဘီ.သက်ပန် ၁၇၉၄-၁၈၄၉ သီကုံးသော ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံ
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေ့စဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှဘယ်လွတ်နိုင်တော်မူသော သူကို ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဋ္ဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွှံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရမည်ဖြစ်၍ (ဟေဗြဲ ၅း၇)
II. ဒုတိယ၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ပင် သေခြင်းတန်ခိုးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်စွမ်းသော ဘုရားသခင် ထံသို့ ခရစ်တော်ဘုရားဆုတောင်းခြင်းကို ကျမ်းပိုဒ်က ထောက်ပြသည်။
ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆-၃၈ ကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်နားထောင်ကြပါ။
“ထိုအခါ ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူ ဂေသရှေမန်အရပ်သို့ ရောက်တော် မူလျှင် ငါသည် ဟိုအရပ်သို့သွား၍ ဆုတောင်းစဉ်တွင် ဤအရပ်၌ ထိုင်နေ ကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူပြီးမှ ပေတရုနှင့် ဇေဗေဒဲ၏သား နှစ်ယောက်တို့ကို ခေါ်သွား၍ နှလုံးမသာ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ။ ထိုအခါ ယေရှုက ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန် ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ်၌ ငါနှင့်အတူ စောင့်၍နေကြလော့ဟု တပည့် တော် သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆-၃၈)။
ဂျွန်မက်အာတာက ဟေဗြဲ ၅း၇ ထဲက ကောင်းသောအချက်အလက်များ ကောက်နုတ်တင်ပြ သော်လည်း ကျမ်းပိုဒ်၏နောက်ဆုံးစာကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာ “သေနေခြင်းထဲက ရှင်ပြန် ထမြောက်ဖို့ အလို့ငှာ ဆုတောင်းသည်ဟု တင်ပြထားသည်။ (ဂျွန်မက်အာတာ ဒီ.ဒီ Thန Mခေဗမအ့ကမ Sအကိပ ငြဘူနယ Wသမိ ငြဘူနျယ ၁၉၉၇ စာ ၁၉၀၄ ဟေဗြဲ ဩဝါဒစာ ၅း၇ မှတ်စုအရ)။
ယေရှုဘုရားသည် သေနေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ရန် ဆုတောင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုံး၀ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၈ သေသေချာချာရှင်းလင်း ဖော်ပြထားသည်မှာ ယေရှုက “ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အသေခံချိန်ကို ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်တော်၌ ညွှန်၍ ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်သည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းခ်ြငး အလွန် ထိုအပြစ်သားများအတွက် အသေခံခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရန် ဆုတောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်လုကာ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံလျှက် အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်း တော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း။ (ရှင်လုကာ ၂၂း၄၄)။ လက်ဝါးကားတိုင်ထက် အသေမခံခင်ည၊ သေခြင်းအချိန်နာရီကို ညွှန်၍ပြသလိုက်သောည၌ အသွေးချွေးထွက်လျှက် အလွန်အင်မတန်ဆိုးဝါး ကြောက်လန့်ဖွယ်သော ဝေဒနာခံစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသပ်ဟတ် ပြောကြားသည်မှာ-
“နာကျင်မှု ဝေဒနာကြောင့် ပင့်သက်ရှုမ၀
တုနှိုင်းမရ ထာ၀ရ ကရုဏာရှင်
သင်၏ မေတ္တာရှင်ကို သိကြပါကုန်
(ယောသပ်ဟတ် ၁၇၁၂-၁၇၆၈ ရေးသားသီကုံးသော အနှိုင်းမရှိ ဒုက္ခဝေဒနာ၊
ညဉ့်နက် သန်းခေါင်ယံ၊ သံလွင်တောင်ထက်မှာ သံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်။)
]ထိုအခါ ယေရှုက ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ်၌ ငါနှင့်အတူ စောင့်၍နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ၍ ထိုမှ အနည်းငယ် လွန်ပြန်လျှင် ပျပ်ဝပ်၍ အကျွန်ုပ်၏အဘ၊ ဤခွက်သည် ကျွန်ုပ်ကို လွန်သွားနိုင်လျှင်၊ လွန်သွားပါ စေသော်။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ် အလိုရှိသည့်အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည် အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသော်ဟု ဆုတောင်းတော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၈-၃၉)
လက်ဝါးကားတိုင်ထက် အသေခံခြင်းမှ ကယ်တင်ရန် အဘဘုရားသခင်ထံ ခရစ်တော် ဆုတောင်းသည်ဟု အနက်ဖွင့် ကျမ်းများက အလိုတူကြသည်။ ထိုအရာသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ် အသေအချာ ပြောနိုင်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နာမည်ကျော် ကျမ်းစာသင်ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဂျေဗန်နုန်မက္ကီး ပြောကြားသည်မှာ-
“အရှင်ဘုရား လက်ဝါးကားတိုင်ထက် အသေခံဖို့ရန် ငြင်းဆန်၊ ရှောင်ရှားခြင်းဟူသည်မှာ လုံး၀မမှန်ကန်ပါ။ လူသားဇာတိအားဖြင့် အပြစ်သားအားလုံးတို့၏ အပြစ်ကို သူ့အပေါ် တင်ဆောင် ယူခြင်းကို လူ့ဇာတိအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်j;သာ ဖြစ်သည်။ (ဂျေဗန်နုန်မက္ကီးတီအိပ်ခ်ျဒီ Thမက အ့န ငြဘူန ၁၉၈၃၊ သောမက်စ်နဲလ်ဆင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ၊ အတွဲ ၄၊ စာ ၁၄၁ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆-၃၉ မှတ်စုအရ)။
နာမည်ကျော် သီဩလော်ဂျီယန် ဒေါက်တာဂျေအိုလီဗာဘက်စ်ဝေလ် ပြောကြားသည်မှာ-
“ရှင်လုကာ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အလွန်အမင်း ချွေးစက်မှ သွေးစက်အဖြစ်သို့ ယိုစီးခြင်းသည် သူ့လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အရ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် လူ့ဇာတိအနေဖြင့် မကြာမီ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတော့မည့် သေခြင်းတိုင်အောင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေရန် ဥယျာဉ်၌ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (ဂျေအိုလီဗာဘက်ဝေလ် ဖီအိပ်ခ်ျဒီ A systematic Theology of the Christian Religion, ်ဒါဗန်ပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၆၂ အတွဲ ၃ စာ ၆၂)
“ပေတရုနှင့် ဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကို ခေါ်သွား၍ နှလုံးမသာ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက်တော် မူ၏။ ထိုအခါ ယေရှုက ငါသည်သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန် ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ် ၌ ငါနှင့်အတူ စောင့်၍နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ၍” (ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၇-၃၈)။
ထိုကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကို သေချာစွာလေ့လာသည့်အခါ ဒေါက်တာ ဂျေဗန်နုန်မက္ကီးနှင့် ဒေါက်တာဂျေအိုလီဗာဘက်တို့၏ မှတ်ချက်ကို ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်က ချဲ့ထွင်ပြောကြားသည်မှာ-
“အကယ်၍ အပိုဒ်ငယ် ၃၇ နှင့် ၃၈ကို သိမှတ်ခြင်းမရှိပါက ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ ဆုတောင်းခြင်း ၏ လေးနက်သော အဓိပ္ပာယ်ကို သင်လွဲချော်သွားပေမည်။ သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်း” သည် ယေရှုဘုရား၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည်လည်း အမှန်တကယ်ပင် ညှိုးငယ်ခြင်းနှင့် လေးလံသော စိတ်နှလုံးနှင့်သေခြင်းနှင့်အမျှ ပူဆွေးသောကသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းစဉ် ယေရှုခံစားခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၉-၄၂ ကြားထဲက “ဤခွက်” သည် သေခြင်း၏ခွက်ဖြစ်ပြီး၊ သေခြင်းသည် ထိုညဂေသရှေမန်ဥယျာဉ် အမှောင်ထုည၌ ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် အထူးသဖြင့် ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ၅း၇ ရည်ညွှန်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ယေရှုသည် “လူ့ဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှ ကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသော သူကို ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုamတင်းပဋ္ဌာနာပြုသဖြင့် ကြောက်စုံရာအမှု၌ ချမ်းသာရမည်ဖြစ်၍” ဟူသော ကျမ်းကိုရည်ညွှန်း၏။သေခြင်းကို ညွှန်၍ပြသသော ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ည၌ “ဤခွက်သည် ကျွန်ုပ်ကို လွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါစေသော်” ဟု ဆုတောင်းခြင်းသည် နောက်တစ်နေ့ ကားတိုင်ပေါ်ဝယ် အပြစ်သားထိုအဖို့ အသက်စွန့်ပေးဆပ်ရန်အတွက် ထိုညအသက်ရှင်လျှက် ကျန်ရစ်ဖို့ ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်၏။ နှုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား “ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” ဟူသည် ယေရှုဘုရား ဆုတောင်းခြင်းကို အဖြေပေးခြင်းဖြစ်၏။ အကယ်၍ ယေရှုသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်ထဲ၌ သေခဲ့မည် ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၌ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ၁ ကော ၁၅း၃ အရ သတင်းကောင်းဟူသည် “ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း ဟုအေa အas gမစေ့as] ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏ ဟုလာ၏။” သာမန်လူသားကဲ့သို့ သေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ သေခြင်းဟူသည် ကျမ်းစာတော်မြတ်လာသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် “ငါ့မုတ်ဆိတ် ကို နုတ်သောသူတို့အား ငါ့ပါးကို ၎င်းအပ်၏” ဟု (ဟေရှာယ ၅ဝး၆)၌ လာပါသည်။ နာကျင် စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရ၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၅) ၌ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ မိမိ၏ အသက်ကို သေခြင်း၌သွန်း၍ မတရားသောသူတို့နှင့် ရေထွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂) «ဇာခရိ ၁၂း၁၀၊ ဇာခရိ ၁၃း၆» လူဆိုးတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ခြေလက်တို့ကို ထိုးဖောက် ကြပါ၏။ (ဆာလံ ၂၂း၁၆) ၌လာ၏ «သူ» အလွန်နာကျင်စွာ «ကားတိုင်ထက်မှ» ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရား အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။ “သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ကြိုတင်ပြီး မိန့်ကြားခဲ့သည်။” (ဆာလံ ၂၂း၁) ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့် လူသားများ၏ ပြောင်လှောင် သရော်ခြင်းကို (လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌) ခံရမည်ကိုလည်း နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကြိုတင်ပြီး ဖော်ပြထားပါသည်။ (ဆာလံ ၂၂း၇-၈) ရောမစစ်သားများကိုယ်တော်၏ အင်္ကျီကို စရေးတံချမည်ကိုလည်း (ဆာလံ ၂၂း၁၈) ၌ ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ယေရှုသည် “နှုတ်ကပတ်တော်လာသည့်အတိုင်း” အသေမခံဘူးဆိုပါ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပေ။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ ကိုယ်တော် ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ! သေခြင်း၏ခွက်၊ ထိုနေ့ည၌ သေခြင်း၏ခွက်သည် ထိုသခင်ကို လွန်သွားစေသောကြောင့် «ထိုသူသည်» ကားတိုင်သို့ သွားရောက် ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်လုကာ ၂၂း၄၃ ၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှားလာ၍ ကိုယ်တော်ကို အားပေး၏။ သဘာ၀လွန်ဖြစ်သော ခွန်အား နှစ်သိမ့်ခြင်းမရှိပါက ယေရှုသည် ထိုညဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ သေလွန်မည်မလွဲပေ။ (ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ဒီ.ဒ The Gospel According to Mathew ထာ၀ရဘုရား၏ ဓါးစာစောင်ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေသူ၊ ၁၉၈၈၀ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ၄၄၁-၄၄၂ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆ - ၄၆ မှတ်စုအရ)
ယေရှုသည် လက်ဝါးကားတိုင်သို့ မရောက်မှီ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ သေလွန်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်မှ လွတ်မြောက်မည် မဟုတ်ကြပေ။
“ထိုခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသော သူကို ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုသဖြင့် ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာ ရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)
III. တတိယ၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဆုတောင်းပဌာနာသံကို ဘုရားသခင် နားညောင်းသည်ဟု ကျမ်းစာတော်မြတ်က မိန့်ဆိုသည်
ယေရှုဘုရားသည် “ကြောက်ရွံ့ခြင်းအမှုအရာ၌ ချမ်းသာရ၏” (ဟေဗြဲ ၅း၇) လက်ဝါးကားတိုင်ထက်သို့ မသွားရောက်ခင်၊ သေခွန်ခဲ့ပါ လျှင် ဘုရားသခင်အား နာခံခြင်းမရှိဖြစ်မည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ ယေရှုသည် မိမိရှေ့၌ ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ရှက်ကြောက်သောအရာကို မမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေခံ၏ (ဟေဗြဲ ၁၂း၂) ယေရှုသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက်သေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုံး၀မဟုတ်ပါ။ အပြစ်၏ အခအကြွေးအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ ကြိုတင်ပြင်ဆင် လျက် မိမိအလိုဆန္ဒပါလျက် အသေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်တော်ထဲ၌ “သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်ခြင်းနှင့်အတူ ပြင်းထန်သောစိတ်၏ ခံစားချက်နှင့် ဆုတောင်းခဲ့သနည်း (ရှင်မာသဲ ၂၆း၃၈)? ဘာကြောင့် “စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်” ပြီး “စိတ်လေးလံ” သနည်း? ဘာကြောင့် မိန်းမောတွေဝေပြီး စိတ်ပူပင်ခဲ့သနည်း (ရှင်မာကု ၁၄း၃၃)? ဘာကြောင့် ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို ခံစားခဲ့သနည်း (ရှင်လုကာ ၂၂း၄၄) ဘာကြောင့် ချွေးစက်သည် သွေးစက်ကဲ့သို့ ကျလာခဲ့သနည်း (ရှင်လုကာ ၂၂း၄၄)?
ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူ့လူသားတို့၏ အပြစ်အပေါင်းကို ထိုညဂေသမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းပဌာနပြုနေသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ယေရှုအပေါ်၌ တင်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်မှာ ထာ၀ရ ဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏ (ဟေရှာယ ၅၃း၆) ထိုအရာများ ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ် ထိုည၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟု ထင်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက် သင်တို့အပြစ်အားလုံး၏ အပြစ်ကြွေးကို လက်ဝါးကားတိုင်သို့ ယူဆောင်သွားဖို့ရန် ထိုည၌ ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ ချပုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် “ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်သည် သစ်တိုင်မှာ ခံယူတော်မူပြီ (၁ ပေ ၂း၂၄)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မတရားသောအမှု သူ့အပေါ်သို့ ဘုရားသခင်တင်သောအခါတွင် ကိုယ်တော်သည် ပြင်းထန်သောဝေဒနာ၊ သွေးချွေးစက်များ ကျသည့်တိုင်အောင် ခံစားတော်မူသည်ကို တွေးမြင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူ ဖို့ရန် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်သို့ သွားရောက်နေခြင်းကို တွေးမြင်ကြည့်ပါ။ ဤကဲ့သို့ ကယ်တင်ရှင်၏ ကြီးမားသော လုပ်ဆောင်ခြင်းကို မိတ်ဆွေ ငြင်းပယ်မှာလား? မိတ်ဆွေ၏ အပြစ်ဝဋ်ကြွေးမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိစေဖို့ရန် မိတ်ဆွေ၏ ထိုက်တန်သော အပြစ်ဒဏ်အားလုံးအစား အသေခံပေးသော ယေရှုသခင်ဆီ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်မည်လား?
တုနှိုင်းမရ ထာ၀ရ ကရုဏာ်တော်
သင်၏၊ မေတ္တာရှင်ကို သိကြပါကုန်”
(“ယောသပ်ဟတ် ၁၇၁၂-၁၇၆၈ သီကုံးရေးသားထားသော အနှိုင်းမရှိ ဒုက္ခာဝေဒနာ၊ ညဉ့်နက် သန်းခေါင်ယံ သံလွင်တော်ထက်မှာ သံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်။)
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျက် သီချင်းနံပါတ် (၇) ကို သီဆိုကြရအောင်။
“ဘေးဥပါတ်များနှင့် ပြင်းထန်သော စုံစမ်ခြင်းများ
သည်းခံခွင့်လွှတ်အခါခါ၊ အဆိုးရွားဆုံး စုံစမ်းမှုများ
သင့်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့၊ သင့်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိန်းဖို့
ညှိုးငယ်သော စိတ်ထားနှင့် ကိုယ်တော်ဆုတောင်းရှာ၏”
“ပြစ်ကြွေးရှိသမျှ ကြေအေးစေဖို့၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ညသို့
ရှိသမျှခွန်အား အတွင်းကြေကာ အန္တရာယ်ဒုက္ခစိုးစိမျှမထိရ
အို ငါ ဝိညာဉ်သင့်ဖို့ နှလုံးကြေကွဲရှာသော သခင်အားကြည့်ပါ
အို ငါ ဝိညာဉ် သင့်အဖို့ နှလုံးကြေကွဲရှာသော သခင်အားကြည့်ပါ”
“ကျေးဇူးတော်ကို ကိုးစားဖို့ သင်အပြစ် ကိုယ်တော် ထမ်းရွက်ပြီး
ကြီးမားသော အတားအဆီးကြားမှ သင်ကို ဘုရားသခင် ဖြစ်ပွားစေပြီ
ကိုယ်တော်အပြင် စုံစမ်းခြင်းအောင်သူမရှိ၊ နှလုံးကြေကွဲရ၏ ဂေသရှေမန်
ကိုယ်တော်အပြင် စုံစမ်းခြင်း အောင်သူမရှိ၊ နှလုံးကြေကွဲရ၏ ဂေသရှေမန်”
“အပြစ်သည် သန့်ရှင်းသောဘုရားနှင့် ပညတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်၏
အပြစ်သည် မေတ္တာတရားကို ဆန့်ကျင်၏၊ အသွေးတော်ကို ဆန့်ကျင်၏
အပြစ်သည် အတိုင်းမရှိ ကြီးမားသမုဒ္ဒရာ ပင်လယ်ကဲ့သို့
ဖုံးကွယ်ပေးပါ၊ ဖုံးကွယ်ပေးပါ အို ဂေသရှေမန်”
“ကျွန်ုပ်အထီးကျန်စဉ် လိုအပ်မှုသည် ကယ်တင်ရှင်မှတစ်ပါး
ကျွန်ုပ်သည် ဖြောင့်မတ်သူမဟုတ်၊ ကောင်းသောအလုပ်ဟူ၍ မရှိ
အစဉ်အတွက် မျှော်လင့်ရာသည် ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်၌ပေ
အစဉ်အတွက် မျှော်လင့်ရသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ပေ”
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ခရိတ်ထန်အယ်လ်၊ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆-၃၈ ကို ဖတ်ကြားပါသည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမိန်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ဂုဏ်တော်ကျူးဧပါသည်။
“ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်တော်၌ ဝေဒနာ၊ ယောသပ်ဟတ် ၁၇၁၂-၁၇၆၈
၁။	ပထမ၊ ခရစ်တော်ဘုရား ဤလောက၌ သက်ရှိထင်ရှားစဉ် အသက်တာ၌ ဆုတောင်းခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာအရ ထောက်ရှုရည်ညွှန်းသည်။ယောဟန် ၁၁း၃၅၊ လုကာ ၁၉း၄၁
၂။	ဒုတိယ၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ပင် သေခြင်းတန်ခိုးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်စွမ်းသော ထာ၀ရဘုရားထံသို့ ခရစ်တော်ဆုတောင်းနေခြင်း ကို သမ္မာကျမ်းစာက ထောက်ရှုရည်ညွှန်းသည်။ ၁ကော ၁၅း၃၊ ရှင်မဿဲ ၂၆း၃၆-၃၉၊ လုကာ ၂၂း၄၄ ဟေရှာယ ၅ဝး၆၊ ဇာခရိ ၁၂း၁ဝး ၁၃း၆၊ ဆာလံ ၂၂း၆၊ ၁ ၇-၈ç ၁၈၊ လုကာ ၂၂း၄၃
၃။	တတိယ၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဆုတောင်းပဌာနာသံကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မူသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာက ထောက်ပြရည်ညွှန်းသည်။ ဟေဗြဲ ၁၂း၂၊ မဿဲ ၂၆း၃၈၊ မာကု ၁၄း၃၃၊ လုကာ ၂၂း၄၄၊ ဟေရှာယ ၅၃း၆၊ ၁ ပေ ၂း၂၄